I-Cialis vs. Viagra: Umehluko, ukufana nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Umphakathi, Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Ukuphuma Inkampani, Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani Inkampani, The Checkout Ezemidlalo Ezisindayo Ezokuzijabulisa Cindezela Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Cialis vs. Viagra: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Cialis vs. Viagra: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Uma uhlangabezana nokungasebenzi kahle kwe-erectile (ED), kunezindlela eziningi ongakhetha ukukusiza ngazo. Izinketho zokwelashwa ze-ED zifaka ezengqondo, indlela yokuphila, kanye izindlela zokwelapha . Imithi emibili ebekiwe kakhulu ibandakanya iCialis (tadalafil) neViagra (sildenafil).
I-Cialis ne-Viagra yizidakamizwa ezimbili zemithi kadokotela ezingaphatha i-ED. Bahlukaniswe baba isigaba semithi ebizwa nge-phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors futhi basebenza ngokwandisa ukugeleza kwegazi ukuya ethangeni. Le mithi isiza indoda ukuthi ithole futhi igcine ukwakhiwa. Ezinye izidakamizwa ezifanayo zifaka I-Levitra (vardenafil) kanye neStendra (avanafil).
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweCialis neViagra?
I-Cialis (amakhuphoni e-Cialis | Yini i-Cialis?) Isidakamizwa segama le-tadalafil. Yavunywa yi-FDA ngo-2003 futhi isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile ne-benign prostatic hyperplasia (BPH). I-Cialis ingathathwa njengoba kudingeka ngaphambi kocansi noma kanye nsuku zonke nemiphumela efinyelela emahoreni angama-36. I-Cialis ifinyelela amazinga aphezulu emzimbeni phakathi kwemizuzu engama-30 namahora we-6 ngemuva kokuyithatha. Kungathathwa ngokudla noma esiswini esingenalutho.
I-Viagra (amakhuphoni e-Viagra | Yini i-Viagra?), Eyaziwa nangokuthi igama layo elijwayelekile elithi sildenafil, yamukelwa yi-FDA ngo-1998 futhi iyisidakamizwa esidumile esenziwe yiPfizer ukwelapha i-ED. Igama lomkhiqizo i-Viagra likhonjiswa kuphela ngokungasebenzi kahle kwe-erectile. Kuthathwa lapho kudingeka ngaphambi kocansi kanye namazinga aphezulu omuthi afinyelelwe kungakapheli imizuzu engama-30 kuya emahoreni amabili ngemuva kokuwuthatha. Ukudla ukudla okunamafutha amaningi nge-Viagra kunganciphisa ukumuncwa komuthi.
Umehluko omkhulu phakathi kweCialis neViagra
Isigaba sezidakamizwa Uhlobo lwe-Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor Uhlobo lwe-Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Uhlobo olujwayelekile luyatholakala Uhlobo olujwayelekile luyatholakala
Ngubani igama elijwayelekile?
Ngubani igama lomkhiqizo? I-Tadalafil
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Ithebhulethi yomlomo Ithebhulethi yomlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? Ukungasebenzi kwe-Erectile: 10 mg ithebhulethi yomlomo ngaphambi kocansi
Ukusetshenziswa kanye-kwansuku zonke kwe-ED: Ithebhulethi yomlomo engu-2.5 mg ngomlomo nsuku zonke
I-BPH noma i-BPH ene-ED: 5 mg ithebhulethi yomlomo nsuku zonke ngasikhathi sinye nsuku zonke Ukungasebenzi kwe-Erectile: I-50 mg tablet yomlomo ngaphambi kokuya ocansini
Yelashwa isikhathi esingakanani? Njengoba kudingeka Njengoba kudingeka
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Amadoda amadala aneminyaka engu-18 nangaphezulu Amadoda amadala aneminyaka engu-18 nangaphezulu
Ufuna intengo engcono kakhulu ku-Viagra?
Bhalisela izexwayiso zentengo ye-Viagra bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo eziphathwe yiCialis vs. Viagra
I-Cialis isetshenziselwa ukuphatha i-ED. Kodwa-ke, futhi kuvunyelwe ukuphatha izimpawu nezimpawu ezivela endlaleni ekhulisiwe ebizwa nangokuthi i-benign prostatic hyperplasia (BPH). I-Tadalafil, isithako esisebenzayo eCialis, iyatholakala njenge-Adcirca, esetshenziselwa ukwelapha umfutho wegazi ophakeme wamaphaphu (i-PAH), noma umfutho wegazi ophezulu emaphashini. I-Cialis nayo ingasetshenziswa ngaphandle kwelebula yomkhuba kaRaynaud, isifo esingajwayelekile semithambo yegazi.
I-Viagra yamukelwa yi-FDA kuphela ukuphatha i-ED. I-Sildenafil citrate, isithako esisebenzayo eViagra, nayo yenziwa njengeRevatio yokwelapha umfutho wegazi ophakeme wamaphaphu (PAH). I-Viagra kwesinye isikhathi isetshenziswa ngaphandle kwelebuli ukwelapha into kaRaynaud kanye nenkinga yokuvusa inkanuko yabesifazane.
Kokubili i-Cialis ne-Viagra nayo inqunyelwe ukuphatha izinkinga ezahlukahlukene ezizungeze i-ED. Isibonelo, i-Viagra ingasiza futhi amadoda ahlangabezana nakho ukukhipha umjovo kusenesikhathi ukuze bakwazi ukulawula kangcono. I-Cialis ikhonjisiwe ukuthi isiza amadoda abhekene nokunye ukungasebenzi kahle kocansi okubandakanya imisebenzi ejaculatory kanye ne-orgasmic .
Isimo I-Cialis I-Viagra
Ukungasebenzi kwe-Erectile (ED) Yebo Yebo
I-Benign prostatic hyperplasia (BPH) Yebo Akunjalo
Isimo sikaRaynaud Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Isifo sowesifazane sokuvusa inkanuko Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Ingabe i-Cialis noma i-Viagra iphumelela kakhulu?
Uma kuqhathaniswa ne-placebo noma ungasebenzisi muthi, i-Cialis ne-Viagra ziyasebenza ekwelapheni ukungasebenzi kahle kwe-erectile. Umehluko omkhulu phakathi kwale mithi emibili uhlobene nokuthi umuthi uhlala isikhathi esingakanani, uthathwa kanjani, nomlando wezokwelapha womuntu owuthathayo.
Yize zombili zisebenza kahle, i-Cialis ingahle ikhethwe ngokufakwa kwayo kanye ngosuku futhi isetshenziselwa ukwelapha i-BPH. I-Viagra ingancanyelwa impilo yayo emifushane engaphansi kwalabo abayisebenzisa kancane njengoba kudingeka.
Phakathi ku ukuhlaziywa kwe-meta kuhlanganisa izilingo ezi-16 ezahlukahlukene nokuhlaziya iziguli ezingaphezu kwe-5000, i-Cialis ne-Viagra ikhombise ukusebenza nokuphepha okufanayo. Le miphumela ibisuselwa kusikali se-International Index of Erectile Function (IIEF) -EF esisetshenziswa kakhulu ukuhlola ukusebenza kwe-erectile. Zombili lezi zidakamizwa zinezigameko ezifanayo zemiphumela emibi. Kodwa-ke, labo abathatha i-Cialis babone ukuzethemba okuthuthukile kwezocansi futhi bakhetha ngaphezu kwe-Viagra ngenxa yokuzwa ingcindezi encane mayelana nokuhlela ngemiphumela esebenza isikhathi eside.
Enye icala ikhombise ukuthi izithako ezisebenzayo zeCialis neViagra zazifaniswa nokusebenza. Kwakungekho mehluko omkhulu phakathi kwale mithi emibili. I-Cialis, noma kunjalo, yaphakanyiswa ukuthi inikeze ukuguquguquka okwengeziwe ngempilo yayo ende.
Uma une-ED, kubalulekile ukubonisana nodokotela ukuze anqume ukuthi iyiphi indlela yokwelashwa engakulungela kakhulu. Omunye umuthi ungasebenza kakhulu noma uncanyelwe omunye ngokuya ngesimo sakho.
Ufuna intengo engcono kuCialis?
Bhalisela izexwayiso zentengo zeCialis bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweCialis vs.Viagra
Igama lomkhiqizo i-Cialis ngokuvamile ayihlanganiswa yi-Medicare nezinhlelo eziningi zomshuwalense. Amanye amacebo angahlanganisa i-tadalafil ejwayelekile. Izindleko zokuthengisa ezijwayelekile ze-tadalafil ejwayelekile ingama- $ 275 ngamathebulethi angamashumi amathathu no-2.5 ​​mg. Ngekhuphoni le-SingleCare, ungathola isaphulelo bese ukhokha cishe u- $ 90-180 ngokuya ngekhemisi.
Igama lomkhiqizo i-Viagra ayijwayelekile ukumbozwa yi-Medicare nezinhlelo eziningi zomshuwalense. Hlola uhlelo lwakho lomshuwalense njengoba amanye amacebo angahlanganisa i-generic sildenafil. Izindleko zokuthengisa ezijwayelekile ze-generic sildenafil range kusuka ku- $ 140 noma cishe ku- $ 400. I-SingleCare ingakusiza wehlise lezi zindleko cishe ezifika ku- $ 75-140 nge-generic sildenafil.
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare? Akunjalo Akunjalo
Umthamo ojwayelekile Amaphilisi ama-2.5 mg (ukulethwa kwama-30) Amaphilisi angama-25 mg (ukulethwa kwama-30)
I-Medicare copay ejwayelekile $ 275 $ 140-400
Izindleko ze-SingleCare $ 90-180 $ 75-140
Imiphumela emibi ejwayelekile yeCialis neViagra
I-Cialis ne-Viagra babelana ngemiphumela emibi ejwayelekile efana nekhanda, ukuqunjelwa kwesisu, ubuhlungu bemisipha, ubuhlungu beqolo nokuxinana kwamakhala. Kokubili imishanguzo ye-ED nayo ingadala ukuthi kufushwe ngezinga elithile, okuwumuzwa ofudumele ngethoni yesikhumba ehlazekile, ikakhulukazi ebusweni. Le miphumela emibi ingenxa yemiphumela ye-vasodilator yale mithi ekhulula izicubu ezibushelelezi emithanjeni yegazi ukukhulisa ukugeleza kwegazi.
Ngaphezu kwale miphumela engemihle, i-Cialis nayo ingadala ubuhlungu kwezinye izitho. Eminye imiphumela emibi ye-Viagra ifaka phakathi izinguquko ezingajwayelekile embonweni, isicanucanu, isiyezi, nokuqubuka. Imiphumela emibi ye-Cialis ne-Viagra ingabandakanya inhliziyo, noma inhliziyo, izinkinga ezifana nokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi, ukuphuma kwegazi emithanjeni yegazi, ukushaya kwenhliziyo, kanye nama-arrhythmias ikakhulukazi uma kuthathwe nezinye izidakamizwa (bheka Ukusebenzisana Kwezidakamizwa).
* 10 mg ithebhulethi I-Viagra
* Ithebhulethi engu-50 mg
Ubuhlungu bekhanda Yebo ishumi nanye% Yebo amashumi amabili nanye%
Ukugaya ukudla Yebo 8% Yebo 9%
Ubuhlungu bemisipha Yebo 4% Yebo amaphesenti amabili
Ukuhlungu obusemhlane Yebo 5% Yebo 4%
Ukuminyana emakhaleni Yebo 3% Yebo 4%
Ukuqhuma Yebo 3% Yebo 19%
Ubuhlungu obusezingalweni noma emilenzeni Yebo 3% Akunjalo -
Umbono ongajwayelekile Yebo <0.1% Yebo amaphesenti amabili
Isicanucanu Yebo <1% Yebo 3%
Isiyezi Yebo <2% Yebo 4%
I-Rash Yebo <2% Yebo amaphesenti amabili
* Xhumana nodokotela noma usokhemisi ngayo yonke imiphumela engemihle engaba khona.
Umthombo: I-DailyMed (Cialis) , I-DailyMed (Viagra)
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zeCialis vs.Viagra
Ama-PDE5 inhibitors afana neCialis neViagra anokusebenzisana kwezidakamizwa okufanayo. I-Cialis ne-Viagra akufanele isetshenziswe nganoma imuphi umuthi onganciphisa umfutho wegazi. Le mithi ifaka ama-nitrate, ama-alpha blockers, ama-antihypertensives (imishanguzo yokwehlisa umfutho wegazi), kanye ne-riociguat. Ukuthatha le mithi ndawonye kungadala umfutho wegazi ophansi okuyingozi.
I-Cialis ne-Viagra zombili zicutshungulwa esibindini. Ngakho-ke, akufanele zisetshenziswe ngemithi eguqula ukusebenza kwama-enzyme athile. Ama-CYP3A4 inhibitors, afana nama-antibiotic athile, ama-antifungal, kanye ne-HIV protease inhibitor drug, angakhuphula izinga leCialis neViagra emzimbeni. Ama-inducers we-CYP3A4, afana nama-anticonvulsants athile afana ne-phenytoin noma i-carbamazepine kanye ne-antibiotic ebizwa nge-rifampin inganciphisa ukusebenza kwe-Cialis ne-Viagra.
I-Cialis ne-Viagra kufanele futhi igwenywe ngophuzo lotshwala novuthi wamagilebhisi. Ukuphuza utshwala noma ijusi lamagilebhisi kungakhuphula imiphumela emibi yemithi ye-ED.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa I-Cialis I-Viagra
I-Butyl nitrate I-Nitrate Yebo Yebo
I-Riociguat Isikhuthazi seGuanylate cyclase Yebo Yebo
I-Alfuzosin I-Alpha blocker Yebo Yebo
Valsartan Umfutho wegazi ophakeme Yebo Yebo
I-Itraconazole Umenzeli we-antifungal Yebo Yebo
I-Saquinavir I-Protease inhibitor Yebo Yebo
I-Carbamazepine I-Anticonvulsant Yebo Yebo
* Lokhu kungenzeka kungabi uhlu oluphelele lwako konke ukuhlangana kwezidakamizwa okungenzeka. Xhumana nodokotela ngayo yonke imithi okungenzeka uyayiphuza.
i-concerta ne-ritalin into efanayo
Izexwayiso zeCialis neViagra
Izidakamizwa ze-ED ezinjengeCialis neViagra zingadala izinkinga zenhliziyo njengokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi, kanye ne-arrhythmias, ikakhulukazi kulabo abanezimo zezempilo zenhliziyo. I-Cialis ne-Viagra nazo zingadala ushintsho kumfutho wegazi lapho zisetshenziswa neminye imishanguzo yegazi.
Ukuvinjelwa okuhlala isikhathi eside kunamahora we-4 kungenzeka ngemithi ye-ED. Izilungiso ezibuhlungu futhi ezihlala isikhathi eside kunamahora ayisithupha zibonisa isimo esibizwa ngokuthi yi-priapism. Uma uhlangabezana nale miphumela emibi, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Yize kungavamile, i-Cialis ne-Viagra zingadala ushintsho olungajwayelekile kumbono noma ekuzweni. Ezimweni ezimbi kakhulu, le mithi ingadala ukulahleka okungazelelwe kokuzwa noma ukubona.
I-Cialis ne-Viagra azivunyelwe i-FDA kwabesifazane noma izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-18.
lapho ungathola khona usizo lwezokwelapha ngaphandle komshwalense
I-Cialis ne-Viagra azivikeli ezifweni ezithathelwana ngocansi (STDs). Cabanga ngezinye izindlela zokuvikela ama-STD.
Imiphumela emibi kakhulu ingahle ivame kakhulu emithini engumbombayi ye-ED. I-Viagra yomgunyathi ingaqukatha ezinye izithako noma amanani angalungile esithako esisebenzayo. Izidakamizwa zomgunyathi azivunyelwe yi-FDA. Qiniseka ukuthi uthola imithi ephephile futhi esebenzayo emthonjeni onokwethenjelwa.
Imibuzo ebuzwa njalo nge-Cialis vs. Viagra
I-Cialis, eyaziwa nangokuthi igama layo elijwayelekile elithi tadalafil, ngumuthi kadokotela osetshenziselwa ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ED). Ingaphatha futhi amadoda nge-prostate ekhulisiwe, noma i-benign prostatic hyperplasia (BPH). I-Cialis ingathathwa njengoba kudingeka noma kanye nsuku zonke ngemiphumela efinyelela emahoreni angama-36.
IViagra yaziwa futhi ngegama layo elijwayelekile elithi sildenafil. Kunqunyelwe ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ED). I-Viagra ivame ukuthathwa njengethebhulethi ye-50 mg imizuzu engama-30 kuya emahoreni ama-4 ngaphambi kocansi. Kufanele kugwenywe ngokudla okunamafutha amaningi okunganciphisa ukumuncwa kwayo.
Ngabe iCialis neViagra ziyefana?
I-Cialis ne-Viagra basesigabeni esifanayo semithi ebizwa nge-phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors. Noma kunjalo, azifani. I-Cialis iqukethe i-tadalafil ne-Viagra iqukethe i-sildenafil. Banemiphumela engemihle ehlukile nokusetshenziswa.
Ngabe iCialis noma iViagra ingcono?
I-Cialis ne-Viagra zombili ziyasebenza ku-ED. I-Cialis ingakhethwa ngemithamo yayo yansuku zonke kanye nemiphumela ehlala isikhathi eside. Uma uhlangabezana nokungasebenzi kahle kwe-erectile futhi ufuna ukwelashwa, kuningi odokotela nochwepheshe abangahlola i-ED yakho futhi sikusize uthole inketho engcono kakhulu yempilo yakho yezocansi.
Ngingayisebenzisa iCialis noma iViagra ngenkathi ngikhulelwe?
Cha. I-Cialis ne-Viagra ayikhonjisiwe kwabesifazane abakhulelwe. Ngenkathi ukusetshenziswa okungekho kwelebula kubikiwe ngesifo sowesifazane sokuvusa inkanuko, abesifazane abakhulelwe akufanele bathathe imishanguzo ye-ED.
Ngingayisebenzisa iCialis noma iViagra ngotshwala?
Akunconywa ukusebenzisa i-Cialis noma i-Viagra ngotshwala. Utshwala bungakhuphula imiphumela emibi njengesiyezi kanye nekhanda. Ukuphuza utshwala ngalezi zidakamizwa kungahle kube nomfutho wegazi ophansi.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi iCialis ifinyelele phezulu?
Ngokusho kwe- Ilebula le-FDA , amazinga aphezulu we-Cialis emzimbeni afinyelelwa kungakapheli imizuzu engama-30 namahora we-6 ngemuva kokuthatha umthamo owodwa. Ukuthatha i-Cialis noma ngaphandle kokudla akuphazamisi ukumuncwa kwayo.
Ngabe iCialis ikwenza uhlale isikhathi eside?
I-Cialis ayithinti amandla akho okuhlala isikhathi eside. Isetshenziselwa ukusiza ukuthola nokugcina ukwakheka kocansi. Ukuvuselelwa ngokocansi noma ukuvuswa kuyadingeka ekwakhiweni ne-Cialis.
Ngabe iViagra neCialis zingathathwa ndawonye?
I-Viagra neCialis akufanele zithathwe ndawonye. Ngoba basebenza ngezindlela ezifanayo, ukuzihlanganisa kungandisa ubungozi bemiphumela emibi.
Okudingayo ukwazi ngezinye izindlela ze-EpiPen
Izihlalo ezi-13 ezihamba phambili zocansi nefenisha ukuze ufeze imicabango yakho
iphilisi lokulawula ukubeletha elihle kakhulu ukunciphisa umzimba
zingaki izinhlobo zegazi ezikhona?
ungakwazi ukuphuza utshwala ngenkathi usephilisi
ibiza malini i-cialis nomshuwalense